Soomaaliya oo UN ka rabta caawinta qaxootiga Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Qaramada Midoobay ka codsatay iney ku saaciddo soo daad gureynta qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan dalka Yemen, ee haatna doonaya iney baxsadaan colaada dalkaas ka taagan.
Wasiirka arrimaha debadda Soomaaliya, C/salaam Hadliye Cumar oo u warramay VOA ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud markii dalka Masar kula kulmay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon uu ku wargeliyey in UNHCR mas’uuliyad ka saaran tahay qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen.
Wasiir Hadliye ayaa sheegay in Qaramada Midoobay muujisay iney diyaar u tahay iney Soomaaliya ka taageerto sidii qaxootiga ka cararaya Yemen loo caawin lahaa.
Dalka Yemen waxaa ku nool ilaa 250 kun oo ruux, kuwaasoo siyaabo kala duwan ku tegay dalkaas, waxaana cabsi kasoo wajahday kooxda Xuuthiyiinta.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in Soomaalida qaxootiga ku ah Yemen ay bilaabeen iney ka baxsadaan dalkaas oo qaarkood gaareen xeebaha deganada Somaliland iyo Puntland.
Cabsida Soomaalida Yemen ayaa korortay kadib markii dowladda Soomaaliya taagreetay go’aanka Isbaheysiga Sacuudigu hogaaminayo uu ku weeraray Xuuthiyiinta Yemen oo hetsya magaalooyin farabadan.
Soomaali reer UK ah oo lagu dilay Idlib, Suuriya